Wararka - Carwada Vietnam iyo Carwada Hindiya
2019 19kaTh Vietnam International Plastics iyo Rubber Industry Exhibition waxaa lagu qabtay 799 Nguyen Van Linh Parkway, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.
2020 11th Bandhigga Caalamiga & Seminar (Plastivision India 2020) ayaa lagu qabtay Hindiya. Bandhiggan waxaa la qabtaa saddexdii sanoba mar.
Bandhigga waxaa kafaala qaaday AIPMA, bandhiggu wuxuu ku fadhiyaa aag 100000 mitir murabac ah. Waxaa jira bandhigyo 1800, ku dhowaad 300 shirkadaha Shiinaha iyo 125000 soo booqdayaal xirfadlayaal ah. Bandhigeyaal iyo daawadayaal ka socda Jarmalka, Ingiriiska, Faransiiska, Boortaqiiska, Talyaaniga, Mareykanka, Shiinaha, Taiwan, Kuuriya, Japan, Singapore, Austria, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Burma, Thailand, Sri Lanka, UAE, Oman, Saudi Arabia, Nigeria, South Africa, Uganda, Tanzania iyo dalal kale oo ka badan 30. Inta badan dadkii wax soo bandhigayay ayaa ku qancay natiijada ka soo baxday bandhiga.
Waxaa la qiyaasayaa in 2000 shirkado Hindi iyo Ajnabi ah oo ka kala socda in ka badan 60 dal ay ka qeyb gali doonaan bandhigga Mumbai sanadka 2020, iyadoo in ka badan 135000 soo booqan doonaan iyo kuwa wax iibsanaya, waxaana la filayaa in aagga bandhigga uu gaari doono 110000 mitir murabac. Inta lagu guda jiro bandhigga, shirkadaha warshadaha balaastigga ah waxay soo bandhigi doonaan adeegsiga aaladaha farsamada iyo caaryada wax soo saarka caaga ah, iyo howlgalka makiinadaha wax daabaca iyo mashiinada baakadaha iyo qalabka.
Tani waa markii ugu horreysay ee shirkaddaydu ay ka qayb gasho bandhigga ajnabiga ah, Waxaan la kulannay saaxiibo badan oo cusub, macaamiil cusub, xiriirro ganacsi oo cusub .Waxaan u qaadnay alaabada shirkaddayada dibadda si aan ugu ogeysiino ajaanib badan badeecadeenna.
Waxaan qorsheyneynaa inaan kaqeybgalno bandhigyo shisheeye oo badan oo aadaya wadamo badan, si aan u muujiyo mashiinadeyda. Ha u ogolaadaan wadamo badan, dad badan inay ogaadaan wax soo saarkeena, aqoonsadaan alaabtayada, iibsadaan alaabtayada.